မလေးရှား ဆိုင်ကယ်စီး အဖွဲ့ မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ်မှ မြဝတီမြို့သို့ ဝင်ရောက်လာပြီး မြန်မာပြည်?? - Yangon Media Group
မြဝတီ၊ ဇန်နဝါရီ ၉
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အထင်ကရနေရာများသို့ လာရောက်လေ့လာကြမည့် မလေးရှားနိုင်ငံမှ ဆိုင်ကယ်စီးခရီးသွား အုပ်စုတစ်စုသည် ဇန်နဝါရီ ၉ ရက် နံနက် ၇ နာရီခွဲက မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။
Moesaic of Myanmar Tribes Co.,Ltd ၏အစီအစဉ်ဖြင့် မလေးရှားနိုင်ငံသား Mr.Dan-iel Hiew Chi Waugh နှင့် အဖွဲ့ဝင်ရှစ်ဦးပါဝင် သော မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးအဖွဲ့သည် ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ကာ ထိုင်း-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးတံတားမှ မြဝတီမြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး နံနက် ၈ နာရီတွင် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှဦးစီးအရာရှိ ဒေါ်စန်းစန်းနုနှင့် ကုမ္ပဏီဧည့်လမ်းညွှန် ဒေါ်အေးမိစံတို့ လိုက်ပါလျက် မြဝတီ-ပဲခူး- ပုဂံ-မန္တလေး-ပင်းတယ-အင်းလေး-ပဲခူး-မြဝတီခရီးစဉ်အတိုင်း လည်ပတ် ရန် မြဝတီ-ကော့ကရိတ် အာရှလမ်းသစ်အတိုင်း ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြသည်။
”သူတို့က မြန်မာပြည်တွင်းကို ဆိုင်ကယ်နဲ့ ဝင်ရောက်လည်ပတ်ချင်ကြတဲ့အတွက် ကျွန်မတို့ ကုမ္ပဏီနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလည်ပတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ မြန်မာ့ရေမြေတောတောင် သဘာဝနဲ့ ပုဂံဘက်က စေတီပုထိုးတွေကို လေ့လာချင်ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ကုမ္ပဏီဧည့်လမ်း ညွှန် ဒေါ်အေးမိစံက ပြောကြားသည်။ ဆိုင်ကယ်စီးအဖွဲ့သည် ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်တွင် မြဝတီမြို့သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး ထို မှတစ်ဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့သို့ပြန်လည် ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ထိုင်းနှင့် မလေးရှားရောက် မြန်မာအလုပ်သမား ၃ဝဝ ကျော် မြဝတီမြို့သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်၊ အများ??
မုံးကိုး၌ မိုင်းနှစ်လုံးပေါက်ကွဲ၊ ထင်းခုတ်သွားသော ရွာသားငါးဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ
၆၆(ဃ) ဖြင့် တရားစွဲခံထားရသည့် အလှမယ်ရွှေအိမ်စည် ကျပ်သိန်း ၁ဝဝ ခံဝန်ဖြင့် အာမခံရရှိ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မြင်းစီးကြေးရုပ်တု လွိုင်ကော်မြို့ ကန္ဓာဟေဝန်ပန်းခြံ၌ စိုက်ထူခြင်းကိ??
တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာသော တရုတ်နိုင်ငံသား သုံးဦးအား တရုတ်နိုင်ငံသို့ စနစ်တကျ လွှဲပြောင်းပေးအ